Kôety - Wikipedia
دولة الكويت / Dawlat al-Kuwayt ((ar))
Teny ofisialy arabo
Renivohitra Kuwait City
Tanàna lehibe indrindra Kuwait City
- Praiminisirtra Monarchie constitutionnelle
- Rano (%) faha 151
2 993 706 mpo.
Anaran'ny mponina Kôety
Sandam-bola Dinara kôetiana (KWD)
I Kôety dia firenena ao Atsinanana Akaiky, any Azia, ao amin' ny tapany atsinanana amin' ny Saikanosin' i Arabia sady manana morontsiraka ao amin’ ny Hoala Persika. Ny renivohiny dia i Kuwait City. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mirefy 17 820 km2 ny velaran-taniny ary miisa 2 818 042 ny mponina ao aminy araka ny fanisana natao tamin' ny 2012. Ny faritr' ora dia +3. Ny ampahany be amin' i Kôety dia tany efitra. Mety mahatratra 50 °C ny maripana mandritra ny fizaràn-taona maina, ary tsy ampy ny orana.
Ny Kôetiana dia 1/3n' ny mponina ao Kôety, fa ny sisa dia mpila ravinahitra avy any ivelany, indrindra ny Indiana sy ny Pakistaney.
I Kôety dia iray amin' ireo firenena manan-karena indrindra maneran-tany. Ny solitany no hany loharanon-karena izay azo trandrahana mandritra ny 150 taona any ho any. Ny taozava-baventy any Kôety dia miompana amin' ny fitrandrahana sy ny fanadiovana ny solitany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôety&oldid=1046077"
Dernière modification le 1 Jolay 2022, à 11:51
Voaova farany tamin'ny 1 Jolay 2022 amin'ny 11:51 ity pejy ity.